မကောင်းမှန်းသိလို့ မပေါင်းပဲ နေတာပါ . . . ကျွန်မ ပြောင်းလဲတာ မဟုတ်ဘူး – Shinyoon
မကောင်းမှန်းသိလို့ မပေါင်းပဲ နေတာပါ . . . ကျွန်မ ပြောင်းလဲတာ မဟုတ်ဘူး
လူ့အကြောင်း ပေါင်းကြည့်မှ သိတယ် တဲ့ ကျွန်မ အချိန်တွေအကြာကြီး ပေါင်းကြည့်ပြီးသွားပြီ အကြောင်းလဲသိပါပြီ မကောင်းမှန်းသိလို့ ဆက်ပြီး မပေါင်းပဲ နေလိုက်တာပါ ဒါကို ပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ ခေါင်းစဉ်မတပ်ပါနဲ့ . . . ကျွန်မ . . . က ဟန်ဆောင်ပြီး တစ်ဖက်သားအပေါ် မပေါင်းတတ်ဘူး ။
လူတချို့က လိုရာဆွဲသွင်းပြီး မျက်နှာဖုံးတွေ ကွာကျလာလို့ အရင်လို ဘေးနားမရှိတော့တာလို့ စွပ်စွဲချင်ကြတယ် ။ တကယ်တော့ . . . ဘေးနားမှာ ရှိနေလို့လဲ မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေ မကောင်းတဲ့ အကြံတွေပဲ ကူးလာမှာ ဖြစ်မယ့်အတူတူ ကိုယ်က အရင် ကင်းအောင်နေလိုက်တဲ့ သဘောပါ ဒီထက် ဘာမှ မထူးဘူး ။
လိုချင်တာ မရှိတော့လို့ လို့ ပြောရအောင်ကလဲ ကိုယ့်ဘက်က ပေးခဲ့ ပေးခဲ့ဖူးတာပါ ဘာဆိုဘာမှ ပြန်ပြီး ရလိုစိတ် ယူလိုစိတ်တွေ မရှိခဲ့ဘူး ကိုယ်တတ်နိုင်တာထက်ပိုပြီး ပေးခဲ့ဖူးတာပါ ဘာများပြန်ပြီး ရခဲ့ဖူးလို့လဲ စေတနာဆိုလဲ စေတနာမို့ မေတ္တာဆိုတော့လဲ မေတ္တာမို့ တစ်ခါတစ်လေ ဆို . . . ကိုယ့်ဘက်က အဆင်မပြေပဲ ကူညီခဲ့ဖူးတဲ့အရာတွေလဲ အများကြီးပါ ဘာတန်ပြန်သက်ရောက်မှုမှ မရှိခဲ့ဘူး ဘယ်စေတနာကိုမှ နားမလည်ခဲ့ဘူးလေ ။
ကျွန်မ မှာ . . . လဲ ကျွန်မ တန်ဖိုးနဲ့ကျွန်မပါ ။ တန်ဖိုးမသိတဲ့အရပ်မှာ တန်ဖိုးမဲ့နေသလို ပုံစံမျိုး အချိန်တွေအကြာကြီး ဆက်ပြီး ရပ်နေဖို့အထိ ကျွန်မမှာ ပါရမီ မပြည့်ဝခဲ့ဘူး ။ လူတိုင်းမှာ ကိုယ့်ဘဝနဲ့ ကိုယ် ရှိသလို ကျွန်မမှာလဲ ကျွန်မ ရည်မှန်းချက်နဲ့ ကျွန်မ ရှိပါတယ် ။ ဥပမာ ပြောရရင် . . . အမြဲတမ်း ရှုံးနေတဲ့ စီးပွားရေးတစ်ခုက ရေရှည် ရပ်တည်ဖို့ မလွယ်သလိုပဲပေါ့ ။ ကိုယ့်ဘက် သူ့ဘက်မမျှတတဲ့ ဆက်ဆံရေးကလဲ ရေရှည် တည်တံ့ဖို့ခက်တယ်လေ ။ အပေါင်းအသင်းမှာ သံယောဇဉ်ပဲ လိုတာပါ အရှုံးအမြတ်မလိုပါဘူးဆိုတဲ့စကားကို အနိုင်ရနေတဲ့ဘက်က ပြုံးပြုံးလေးပြောနေနိုင်ပေမယ့် ခံရတဲ့ဘက်ကတော့ ရင်ထဲ နင့်နေအောင် နာချင်နာနေတတ်တာလေ ။
ကျွန်မ တော်ရုံတန်ရုံနဲ့ လွတ်ချတတ်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် မဟုတ်ဘူး ။ ရည်ရွယ်ချက်ချင်းမတူလို့ ပန်းတိုင်ချင်းမတူလို့ စောစောစီးစီး လက်ပြနှုတ်ဆက်ခံရုံပါ ဒီထက်ပိုတဲ့ ဒဏ်ရာတွေ နဲ့ ဒီထက်ပိုပြီး မမုန်းချင်လို့ပေါ့ ။ ကျွန်မ ပြောင်းလဲသွားတာ မဟုတ်ဘူး မကောင်းမှန်းသိလို့ မပေါင်းပဲ နေတာပါ ။
လူ႔အေၾကာင္း ေပါင္းၾကည့္မွ သိတယ္ တဲ့ ကြၽန္မ အခ်ိန္ေတြအၾကာႀကီး ေပါင္းၾကည့္ၿပီးသြားၿပီ အေၾကာင္းလဲသိပါၿပီ မေကာင္းမွန္းသိလို႔ ဆက္ၿပီး မေပါင္းပဲ ေနလိုက္တာပါ ဒါကို ေျပာင္းလဲသြားတယ္လို႔ ေခါင္းစဥ္မတပ္ပါနဲ႔ . . . ကြၽန္မ . . . က ဟန္ေဆာင္ၿပီး တစ္ဖက္သားအေပၚ မေပါင္းတတ္ဘူး ။
လူတခ်ိဳ႕က လိုရာဆြဲသြင္းၿပီး မ်က္ႏွာဖုံးေတြ ကြာက်လာလို႔ အရင္လို ေဘးနားမရွိေတာ့တာလို႔ စြပ္စြဲခ်င္ၾကတယ္ ။ တကယ္ေတာ့ . . . ေဘးနားမွာ ရွိေနလို႔လဲ မေကာင္းတဲ့အက်င့္ေတြ မေကာင္းတဲ့ အႀကံေတြပဲ ကူးလာမွာ ျဖစ္မယ့္အတူတူ ကိုယ္က အရင္ ကင္းေအာင္ေနလိုက္တဲ့ သေဘာပါ ဒီထက္ ဘာမွ မထူးဘူး ။
လိုခ်င္တာ မရွိေတာ့လို႔ လို႔ ေျပာရေအာင္ကလဲ ကိုယ့္ဘက္က ေပးခဲ့ ေပးခဲ့ဖူးတာပါ ဘာဆိုဘာမွ ျပန္ၿပီး ရလိုစိတ္ ယူလိုစိတ္ေတြ မရွိခဲ့ဘူး ကိုယ္တတ္ႏိုင္တာထက္ပိုၿပီး ေပးခဲ့ဖူးတာပါ ဘာမ်ားျပန္ၿပီး ရခဲ့ဖူးလို႔လဲ ေစတနာဆိုလဲ ေစတနာမို႔ ေမတၱာဆိုေတာ့လဲ ေမတၱာမို႔ တစ္ခါတစ္ေလ ဆို . . . ကိုယ့္ဘက္က အဆင္မေျပပဲ ကူညီခဲ့ဖူးတဲ့အရာေတြလဲ အမ်ားႀကီးပါ ဘာတန္ျပန္သက္ေရာက္မႈမွ မရွိခဲ့ဘူး ဘယ္ေစတနာကိုမွ နားမလည္ခဲ့ဘူးေလ ။
ကြၽန္မ မွာ . . . လဲ ကြၽန္မ တန္ဖိုးနဲ႔ကြၽန္မပါ ။ တန္ဖိုးမသိတဲ့အရပ္မွာ တန္ဖိုးမဲ့ေနသလို ပုံစံမ်ိဳး အခ်ိန္ေတြအၾကာႀကီး ဆက္ၿပီး ရပ္ေနဖို႔အထိ ကြၽန္မမွာ ပါရမီ မျပည့္၀ခဲ့ဘူး ။ လူတိုင္းမွာ ကိုယ့္ဘ၀နဲ႔ ကိုယ္ ရွိသလို ကြၽန္မမွာလဲ ကြၽန္မ ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ ကြၽန္မ ရွိပါတယ္ ။ ဥပမာ ေျပာရရင္ . . . အၿမဲတမ္း ရႈံးေနတဲ့ စီးပြားေရးတစ္ခုက ေရရွည္ ရပ္တည္ဖို႔ မလြယ္သလိုပဲေပါ့ ။ ကိုယ့္ဘက္ သူ႔ဘက္မမွ်တတဲ့ ဆက္ဆံေရးကလဲ ေရရွည္ တည္တံ့ဖို႔ခက္တယ္ေလ ။ အေပါင္းအသင္းမွာ သံေယာဇဥ္ပဲ လိုတာပါ အရႈံးအျမတ္မလိုပါဘူးဆိုတဲ့စကားကို အႏိုင္ရေနတဲ့ဘက္က ၿပဳံးၿပဳံးေလးေျပာေနႏိုင္ေပမယ့္ ခံရတဲ့ဘက္ကေတာ့ ရင္ထဲ နင့္ေနေအာင္ နာခ်င္နာေနတတ္တာေလ ။
ကြၽန္မ ေတာ္႐ုံတန္႐ုံနဲ႔ လြတ္ခ်တတ္တဲ့ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ မဟုတ္ဘူး ။ ရည္႐ြယ္ခ်က္ခ်င္းမတူလို႔ ပန္းတိုင္ခ်င္းမတူလို႔ ေစာေစာစီးစီး လက္ျပႏႈတ္ဆက္ခံ႐ုံပါ ဒီထက္ပိုတဲ့ ဒဏ္ရာေတြ နဲ႔ ဒီထက္ပိုၿပီး မမုန္းခ်င္လို႔ေပါ့ ။ ကြၽန္မ ေျပာင္းလဲသြားတာ မဟုတ္ဘူး မေကာင္းမွန္းသိလို႔ မေပါင္းပဲ ေနတာပါ ။
ကျွန်မ နည်းနည်းလေး ရင့်ကျက်စပြုလာပါပြီ . . .